यात्रा संस्मरण: प्रकृतिको अनेक सौन्दर्य घान्द्रुकमा | चितवन पोष्ट दैनिक
यात्रा संस्मरण: प्रकृतिको अनेक सौन्दर्य घान्द्रुकमा
२०७० फाल्गुन २४, शनिबार ०२:३० गते
नारायणगढको पुलचोकबाट म र केही मेरा मिल्ने साथीहरु रात्रिबसमा चढेर बिहान करिब चार बजे नयाँपुल पुग्यौँ । बसले सुनसान बाटोमा हामीलाई छोडिदियो । त्यही सडकमा हामी अलमलमा थियौँ, हामी कहाँ बास बस्ने भनेर । फेरि, उज्यालो पनि हुने बेला भैसकेको थियो । बाटोको किनारमा झोला मिलाएर केही अगाडि बढ्यौँ । बाटोको माथि एउटा गेट भएको टिनको होटलजस्तो घर अँध्यारोमै देख्यौँ र त्यही बाटोबाट हामीले होटल मालिकलाई बोलायौँ । होटल मालिक टर्च लाइट बालेर आइपुगेपछि हामीले सोध्यौँ– बास छ कि छैन ? उनले भने– कोठाहरु त पाउनाहरुले भरिएका छन् । त्यही पनि तपाईंहरु यतिबेला कहाँ जानुहुन्छ, जसोतसो यहीँ व्यवस्था गरिदिन्छु । त्यति भनेपछि हामी पछि लाग्यौँ र एउटा सानो कोठामा सुत्ने व्यवस्था मिलाएर हामी त्यहीँ बस्यौँ ।
जताततै रक्सी र जाँडका भाँडाहरु राखेको त्यो कोठामा रक्सी र जाँडको गन्धले बसिनसक्नु थियो । तैपनि, बस लागेर थकित शरीर कहाँ पल्टिऊँजस्तो भैरहेको थियो । म मैला सिरकका खोल देखेर किलकिल मान्दै पल्टिने सुरमा थिएँ । साथीहरुले तिमी आज सुतेनौ भने भोलि हिँडेर घान्द्रुक पुग्न सक्दिनौ भनेपछि म सुतेँ । बिहान ५ बजे आँखा उघार्दा माथिपट्टि छानाको प्लास्टिकबाट छर्लंग उज्यालो प्रकाश शरीरभरि परेको देखेर म झस्किएँ । खुल्ला आकाशमुनि सुतिरहेको जस्तो लाग्यो । हामी बिहान उठेर नित्य कर्म सकेर आफ्नो गन्तव्य घान्द्रुकतिर लाग्यौँ ।
बाटोमा हिँडिरहँदा धेरै विदेशी थोरै नेपाली पैदलयात्रुहरु देखिन्थे । मोदीखोलाको पुल तरेर पारि पाखामा टक्क घाम हाम्रै टाउकोमा पर्ने गरी पोखिएको र उत्तिसका बडेमानका रुखहरु टन्न कतैकतै, सानासाना खोपटा गरा भएका खेतमा चैते धान रोप्ने तयारीमा स्थानीय बासिन्दा देखिन्थे । मोदीखोला सेता फिँजका गुजुल्टा बनाएर ढुंगाहरुसँग ठोक्किएर बजारिँदै बेस्सरी आवाज निकालेर आफ्नो गतिमा बगिरहेको थियो ।
दायाँतर्फ भने बायाँतर्फ माथि पहाडबाट ठूलाठूला झरनामा सप्तरंगी इन्द्रेणी परेर लामालामा झरना हाम्रै टाउकोमाथि पर्लान् जस्तै गरेर झरेका प्रकृति पनि कति अनौठो थियो ! यस्ता दृश्यले मेरो त्यसै मन डुबाउँछ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, त्यस्तै सुन्दर एकान्त ठाउँमा घर सारेर बाँकी जीवन व्यतीत गरौँ, मान्छेको मन न हो । हामी बाटोमा नास्ताका लागि सानो होटलमा चाउचाउ अर्डर गरेर झरनामा फोटो खिच्न गयौँ । विदेशीहरु क्यामराका अग्ला स्ट्यान्ड बोकेर ती झरनासँग फोटो खिच्दै थिए । हामी पनि २–४ वटा फोटो खिचेर खाजा खान लाग्यौँ । मन त्यसै हलुका भएको थियो, लाग्थ्यो गन्तव्य नै नआओस् । बाटोमा भेटिने प्रत्येक विदेशीले नमस्ते भनेर मुस्कानसहित स्वागत अभिवादन गरिरहने । रूखो सहर नारायणगढमा बसेको मान्छे त्यस्तो नयाँ ठाउँमा हिँडाइको पीडा नै भुल्ने गरी गरिने त्यस्ता अभिवादनले म आनन्दित हुन्थेँ । मोदीखोलाको किनारैकिनार हिँड्नुपर्ने बाटोछेउमा सिमलका बोटहरु ढकमक्कै फुलेर रातै भएको पाखो, सुसाउने मोदीखोला, चराहरु कराउने, कतै बाटोमै सिम्सारजस्तो, पानीका मूल निस्केका बाटो तल–माथि स–साना घरखेत, कतै चौतारो विश्राम गर्न बनाएको, सम्भव भए भागेर त्यो खोलामा ढुंगामा यता फुत्त उता फुत्त गर्ने ती फिस्टे चराजस्तै म पनि त्यसै गरुँजस्तो लाग्ने मन ।
बाटोमा घान्द्रुकसम्म पुग्ने घोडा पनि भाडामा पाइँदा रहेछन् । हामीले ती घोडामा चढेर फोटोहरु खिच्यौँ । हामी पैदलयात्रा गर्ने भनेर घोडामा नचढ्ने विचार ग¥यौँ । करिब ९ बजे हामी फेदीमा पुग्यौँ र बिस्तारै उकालो लाग्यौँ । ३–४ घन्टा हिँड्दै तेर्सो बाटोमै थाकिसकेको थिएँ । मेरो ठाडो उकालो देखेपछि सातो गयो । टाउको सीधै ठाडो परेर हेर्नुपर्ने त्यो उकालो, उफ् ! मलाई देख्दै अत्यास लागेको थियो । माथिबाट अन्नपूर्ण बेसक्याम्प घुमेर फर्केका विदेशीहरुको ओइरो थियो । खच्चडहरुमा सामान ढुवानी गर्नेको ताँती । बाटो साँघुरो थियो, आफूभन्दा ठूलो भारी बोकेर दुईवटै हातमा लठ्ठी टेकेका, छुँदा पनि मैला लाग्लाजस्तो शरीर भएका, अनेक सुखसयलमा हुर्केर भौतिक सुखको उपभोग गरेका विदेशी र म सामान्य परिवारमा जन्मेर यही पाखापखेरामा हुर्केको मान्छे । म आफूलाई देखेर अप्ठेरो लागिरहेको थियो । मनमा हिम्मत जुटाएर उकालो चढ्ने प्रण गरेँ । बाटोमा ढुंगाका छपनी ओछ्याएर बाटो सजिलो बनाइएको थियो । ठाउँठाउँमा पानी खाने धाराहरु, झोला बिसाउने चौतारी पनि थिए । मनमनै एउटा विकसित नमुना गाउँजस्तो लागिरहेको थियो मलाई ।
उकालो बाटोमा ठाउँठाउँमा स–साना होटलहरु थिए । पाउडर दूधको चिया, कफी पाइँदोरहेछ । हामी एउटा होटलमा बसेर कफी खायौँ । पारि टाढा गाउँ थियो, बीचमा मोदीखोलाको बारी–पाखामा हामी बसेर कफी खायौँ । एकछिन त्यहीँ बसेर थकाइ मेटी हामी बाटो लाग्यौँ । विदेशी कोही बच्चा बोकेर त कोही बूढाबूढी रिटायर्ड लाइफ भन्दै नेपालका कुनाकाप्चा घुमेर आफूलाई सुखी भएको महसुस गर्दारहेछन् । हामीलाई भने आफ्नै देश, भाषा र परिवेश मिल्छ, थोरै खर्चमा पनि घुम्न पुग्छ, तर खोइ हामीमा त्यस्तो सोचको विकास भएको ? मलाई थक्कथक्क लागिरह्यो, तिनीहरुलाई देख्दा । उकालो निकै माथि आएको जस्तो लागेको थियो । कान पड्केर उचाइको संकेत गरेका थिए र माथि पुगेपछि तल फर्केर हेर्दा त ओहो ! कति रमणीय खेतका गराहरु, टन्न फलेर बनेका पाखाले आफ्नो काखमा राखेजस्तो । खेतीयोग्य जमिन अनि कतै–कतै स्कुलहरु पनि थिए । मोदीखोला निकै तल परिसकेको थियो, कराएको आवाज सुनिन छोडिएको थियो । माथि पुगेपछि त्यही चौतारीमा एकछिन बस्न मन लाग्यो । एकान्तको माझमा पारि भित्तामा पहिरोले ताछेको भयानक दृश्यनजिकै दायाँतर्फ माथि प्रकृतिले आफैँ बनाएको विशाल ढुंगाको ठूलो भित्तो । रुखहरु कतै छैनन्, ढुंगैढुंगाको भित्तोनजिकै एउटा सानो खोला तुरतुर गरेर कराएको आवाज आउँथ्यो । घान्द्रुक अझै कति टाढा छ भन्दा ३–४ घन्टा लाग्छ भन्थे स्थानीयवासी । म त त्यहीँको चौतारीमा लम्पसार परेर आँखा चिम्लँदै एकछिन सुतिरहेँ । कस्तो अद्भुत ठाउँ ! काला ढुंगाका भित्ता, राम्रो छपनी ओछ्याएर बनाएको बाटो, डिलतिर बसेर हे¥यो भने मोदीपारिको गाउँका मनोहर बस्ती, गाउँ र खेतबारीहरु देखिने । त्यहाँ हामीले थुप्रै फोटोहरु खिच्यौँ । नजिकै सानो खोलामा पानीघट्ट बनाएर गाउँलेहरुले सञ्चालन गरेका रहेछन् । हामीले मुहानसम्म नै पुगेर हे¥यौँ ।
मलाई धेरैबेर त्यहाँ वरिपरिको वातावरणसँग आफूलाई घुलाउन मन लाग्यो । आधा घन्टा त्यो परिवेशमा प्रकृतिसँग अडिएर बसेँ म । मनमनै सोचेँ, कर्ण शाक्यले क्यान्सर निवारणका लागि चुरोटमा ट्याक्सको अभियान चलाउँदा पाँच खिल्ली चुरोट खाने महिला यतैकतै चौतारीमा घाँसको भारी बिसाएर बसेको देखे होलान् र उनको मनमा यही वातावरणले त्यस्तो महान् कार्यको भिजन आएको होला । कहिलेकाहीँ मान्छेको दिमागले राम्रो कुराको योजना बनाउँदा मनलाई पनि त्यस्तै स्वतन्त्र र प्रफुल्ल बनाउने ठाउँको पनि मह¤वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । कुनै ठाउँ र परिवेशले यति मह¤वपूर्ण र मह¤वाकांक्षी योजना बनाउन सहयोग गर्छन्– त्यो पल मैले सोचिरहेँ ।
तेर्सो बाटो अलिकति हिँडेपछि बाटो तल–माथि पात नभएका स–साना रुखहरु देखिन्थे । त्यहाँ काला लेउ लागेका ठूलाठूला ढुंगाहरु थिए । बाटोमा विदेशीहरु भारी बिसाएर तल–माथि सम्म ठाउँमा बसेर प्रकृतिसँग साक्षात्कार गरिरहेका देखिन्थे । मौसमले खासै साथ नदेला जस्तो गरेर आकाश अँध्यारो हुँदै आयो, हावा बेस्सरी चल्न थाल्यो र बाटोमै बेस्सरी पानी पर्ने सुरसार देखेपछि हामी आत्तिएर अलि छिटोछिटो हिँड्न थाल्यौँ । एकैछिनमा मुसलधारे पानी प¥यो, भोकले पनि अत्याएको थियो । हिँड्ने गति थिएन, ठाडै उकालो आएको थियो तर पनि हामी हिँडिरह्यौँ । घान्द्रुकनजिक आइपुग्दा त झन् ज्यानमारा उकालो रहेछ । तल हे¥यो भने छ्याङ्गै भीर, माथि हे¥यो भने ठाडो उकालो रिँगटा लाग्ने । म त थचक्कै बाटोमै बसेँ ।
अलि पर अलिअलि घरहरु भेटिए, अब त आयो होला भनेर मन अलि आशावादी भयो । जीवनमा सुविधा प्राप्त नहुन्जेल मात्रै यो के–के न हो जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, सुविधाहरु आफ्नो पहुँचमा छन् र तिनको उपयोग जुनबेला जसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बोध भएपछि भने मान्छेले सुविधामा रस अनुभव गर्दैनन्, असुविधातर्फ आकृष्ट हुन्छन् । मान्छेको स्वभाव नै प्रयोगधर्मी छ । हामी एउटा घरमा छिरेर कफी अडर ग¥यौँ । एउटा विदेशीसँग रहेको गाइडसँग कुरा गर्दै त्यस भेगको वरपरका अरु पर्यटकीय गन्तव्यका बारेमा सोध्यौँ । उसको क्यामरामा कैद गरेका मह¤वपूर्ण र रहरलाग्दा दृश्यहरु हेरेँ मैले । उसले हामीसँग निकै बेर घुलेर कुरा ग¥यो, अनि हामीले कफी पियौँ । हामीले घान्द्रुकको माथिल्लो भागमा गएर बास बस्ने सल्लाह ग¥यौँ र बाटो लाग्यौँ ।
एउटा अस्टे«लियन जोडी जो हामीसँग केहीबेर सहयात्रा गरेका थिए, उनीहरु त्यहीँको एउटा रिसोर्टमा बास बस्ने भए । निकै बेर होटल मालिकसँग मोलमलाइ गरेपछि बल्ल उनीहरु बसेका थिए । मैले मनमा विदेशीहरुले पैसाको मह¤व यहाँ यति टाढा आएर पनि उत्तिकै गरेको पाएँ । हामी करिब आधा घन्टाको उकालो हिँड्यौँ । बिस्तारै पानी रोकिइसकेको थियो । हिँड्दै जाँदा माथितिर ठूला–साना झ्याङ खोल्सामा कुलकुल गर्ने सानो पानीको मुहानबाट झरेको सफा पानी थियो । स–साना ढुंगामा लेउ टाँसिएर खैरो, हरियो थरीथरीका देखिने ती ढुंगाका थुप्राहरुमा साना फिस्टे चरा टाउको पानीमा चोप्दै, हल्लाउँदै गर्थे ।
त्यहाँ सानो काठको पुल बनाइएको रहेछ, खोल्सो तरेपछि माउन्टेन एभरेस्ट होटल जाने बाटो तेर्सो र अलिकति छपनी ओछ्याएर बनाएको उकालो बाटो थियो । हामी उकालो बाटोतिर लाग्यौँ । माथि पुगेर बास बस्यौँ भने भोलि घान्द्रुक गाउँ पूरै हेर्न सजिलो होला भन्ने ठान्यौँ । त्यहाँ बस्न हामीसँग जम्मा एक दिन समय थियो । त्यसैले, सबैभन्दा माथिल्लो गाउँमा हामी माउन्टेन भ्यू भन्ने गुरूङको एउटा होटलमा बास बस्यौँ । भोलि बिहानको सूर्योदय हेरेर पूरै घान्द्रुक गाउँ घुम्ने हाम्रो योजना थियो । भोक बेस्सरी लागेको थियो, शरीर पनि थाकेको थियो । एउटा कोठा लियौँ हामीले । होटलका सबैजसो कोठाहरु विदेशीहरुले भरिभराउ थिए र त्यहीँ आफ्ना सामानका झोलाहरु राखेर म त लम्पसार पर्दै सिरकले मुख छोपेर लुगैसँग पल्टिएँ बेडमा कतै नहेरीकन । साथीहरुले भने नुहाइवरी फ्रेस भएर नास्ता अर्डर गरेका रहेछन् । पछि आधा–एक घन्टापछि उठ्दै हामीले फ्राइ राइस र चिया अनि केक नास्तामा खायौँ र मैले पनि बरन्डामा उठेर दायाँबायाँ आँखा घुमाएँ । एकछिन बसेपछि अलि हल्का महसुस भयो र नुहाउन बाथरूम छिरेँ । पानी ज्यादै चिसो थियो । चैत महिना, चितवनको गर्मीबाट एकै दिनमा त्यहाँ पुगेको त पानी हिउँजस्तै चिसो ! शरीरमा हाल्ने आँटै आएन । होटल मालिकलाई अनुरोध गरेर तातो पानीको व्यवस्था भएपछि बल्ल नुहाएँ र तल झरेँ ।
साँझ छिप्पिसकेको थियो, बेलुकाको खाना तयार भैसकेको रहेछ । हामीले सादा नेपाली खाना खायौँ । मेरो आँखा त्यो घरको आतिथ्य सत्कार देखेर मोहित थिए । भित्तामा बुद्धका मूर्ति, तस्बिर, पेन्टिङका विभिन्न सामग्री, हस्तकलाका नेपाली संस्कार झल्किने खालका सामग्री, कस्तो मिलाएर राखेको ! एउटा घरानियाँ गुरूङ समुदायको झझल्को दिने खालको थियो । होटलको सजावट सफा, सुग्घर, कतै धूलोको कणसम्म नदेखिने सफा थियो । एकछिन गफ गरेर हामी सुत्न गयौँ । थकाइले मसँग अरु बसेर कुरा गर्ने सामथ्र्य थिएन, त्यसैले हामी सुत्यौँ । पानी परेकाले पुष–माघको जस्तो जाडो लागिरहेको थियो । पूरै होटल खचाखच विदेशी पाहुनाले भरिएका थिए, त्यो साँझ ।
बिहान ६ बज्दा नबज्दै झ्यालबाहिर मेरा आँखाहरु अन्नपूर्ण साउथ, माछापुछ«े, नीलगिरिलगायतका शिखरहरुमा दौडिरहेका थिए । म सोच्दै थिएँ– कुनै दिन त्यहाँ माथिको उचाइमा पुग्न मेरो शरीरले साथ देला या नदेला कुन्नि ! बिहानको समय बेडबाट उठ्दै नित्य कर्म सकाएर कालो चिया र नास्तामा केक खायौँ । हिजो राति पानी परेपछि बिहान खुलेका हिमाल, निख्खर हरिया पाखा, वरपरको गाउँ एकदमै सफा थियो । मौसम छर्लङ्ग थियो, प्रकृति पूरै खुलेको । कल्पनाभन्दा बाहिरको सुन्दर प्रकृति त्यो परिकथामा परीहरु खेल्ने स्वप्निल संसारको तस्बिरजस्तो लाग्थ्यो यो उचाइ । शिरमाथि सोझै निख्खर नीलो आकाश मात्रै छेक्ने, छल्ने केही थिएन । वरिपरि पर छेउका चट्टान, पहाडहरुमा सेता केश फुलेका मानिसहरु लहरै बसेजस्तो गरी बसेका हिमाल, पहाडहरु देखिन्थे । प्रकृतिको एउटा बेग्लै रुप थियो मेरो अगाडि, जुन मैले यसअगाडि कहिल्यै देखेकी थिइनँ । यति मनमोहक दृश्य हेर्ने अवसर मलाई जु¥यो । धेरै दिन पहिलादेखि यहाँका हिमाल खुलेका थिएनन् रे, मौसम राम्रो नभएर विदेशीहरु निराश हुन्थे रे ! तर, त्यो दिन भने पूरै हिमालहरु खुलेका थिए ।
एकछिन हामी घान्द्रुकको शिखरको टुप्पोमा पुग्न हिँड्दाहिँड्दै सूर्योदय भएपछि सेता, सफा, चम्किला हिमालहरुले नाटकीय रुपमा रंग फेरेर राता भए हेर्दाहेर्दै । पत्याउन गाह्रो भएको थियो मलाई, यो विकट उचाइमा यति सुन्दर भूखण्ड पनि होला भनेर । बाटोबाटै परको गाउँ देखिन्थ्यो । टम्म मिलेर बनेको, पूरै ढुंगे छाना भएको रातो माटोले पोतेका घरहरु छपक्कै थिए । गाउँ सुन्दर देखिन्थ्यो । मैले माथि उचाइमा पुग्ने क्रममा साथीहरुलाई माछापुछ«ेछेउमा पारेर धेरै फोटोहरु खिचेँ । गाउँभन्दा अलिकति माथिसम्म गराहरुमा शिरूघाँस थिए । उत्तिसका बोटहरु डिलडिलमा थिए । हामी ती सम्मका गराहरुमा बसेर निकै बेर त्यहाँबाट तल देखिने घान्द्रुकको पूरै गाउँ र पारि दायाँबायाँ देखिने हिमालहरु हेरिरह्यौँ । म मेरो भौतिक शरीरलाई त्यतै छोडेर मेरो आत्मा, तनमन पूरै त्यतै उनीहरुसँग हात मिलाउन, परिचय गर्न र नाता गाँस्न लालायित थिए ।
निकै बेरसम्म त्यहाँ बसेर हामी उठ्यौँ । हामी उकालोमाथि चढ्दा निकै उचाइमा केही केटाकेटीहरु जंगलमा गुलेलीले चराहरु ताक्दै गरेका भेटिए । सुनसान जंगलमा एउटा चौतारो थियो, म त्यहीँ थचक्क बसेँ । मेरा साथीहरु भने ती बच्चाहरुसँग गुलेली माग्दै थिए । उनीहरु झन् डराएझैँ गरेर भन्न खोजेर एकछिन फकाएपछि बल्ल दिन तयार भए । गुलेलीसँग मैले उनीहरुको फोटो खिचिदिएँ र उनीहरुलाई फिर्ता दिएँ । उकालो बाटो थियो, वनमा गुराँसका बोटहरु पनि देखिन्थे । अलिकति माथि गुम्बा छ रे भन्ने सुनेकाले मलाई त्यहाँ पुग्ने चेष्टा जागेको थियो, साथीलाई कर गरेर पुग्न खोजेकी थिएँ ।
करिब १०–१५ मिनेट उकालो बाटोपछि सानो गेट बनाएको ठाउँ आयो र हामी त्यही गेटबाट माथि चढ्यौँ । चारैतिर टन्न मिलाएर चौपारीबीचमा ठूलो रुख, रुखमुनि सानो गुम्बा थियो । भुइँमा टलक्क टल्कने छपनी ढुंगा निकै मिलाएर छापिएको रहेछ । ठूलो घन्टीमुनिबाट टाउको छिराएर हामी त्यो प्रांगणमा पुग्यौँ । थाकेको र पानी पनि कतै नभेटिएकाले गाह्रो अनुभव गरिरहेको शरीर त्यहाँ पुगेपछि एकैछिनमा हलुका अनुभव गर्दै थियो । घान्द्रुक गाउँको टुप्पोमा पुगेपछि चारैतिर मेरा दृष्टि छरिए । ठीक दायाँपट्टि घना हरियो जंगल थियो, पूर्वपट्टि गाउँबस्तीको खेतीयोग्य पहाडी जमिन थियो । उत्तरतर्फ हिमालका बथान लहरै थिए र पश्चिमपट्टि पनि पूरै सेतै हिमाल थिए ।
करिब १० बजेको हुँदो हो, प्रभातमा राता देखिने हिमालहरु पूरै घाममा चाँदीजस्तो टल्केर उज्याला थिए । कतै सेता कतै काला गुजुल्टा परेका ती बादलहरु हिमालसँग साउती मारेजस्तो गरेर घरी यता त घरी उता गरिरहेका थिए । माछापुछ«े हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल त्यति नजिकैबाट मैले कहिल्यै देखेकी थिइनँ । यसो हात तन्कायो भने छुन सक्छु जस्तो लागिरहेको थियो । माथि आकाश पनि त्यस्तै नजिक थियो, हात तन्कायो भने छुन सकिएला जस्तो । मैले जीवनमा त्यति अद्भुत र रमणीय ठाउँ कहिल्यै देखेकी थिइनँ । सफा, नीलो आकाशमा उडेका सेता परेवा, घरी गुम्बामा बस्थे भने घरी आकाशमा उडिरहन्थे । सीधै तल टम्म मिलेको घान्द्रुक गाउँ थियो । म त्यही चौतारीमा बसेर अनुभव गर्दै थिएँ, कल्पनै गर्न नसकिने विविधताको । यति सुुन्दर संयोजन प्रकृतिले पृथ्वीमा सम्भवतः विरलै गरेको होला ! एक छिन आँखा बन्द गरेर पल्टिएँ । वरपर वनमा गुराँस फुलेर राता–राता बुच्का देखिन्थे । जीवन एकै दिनको फरकमा यति आनन्दित हुन्छ, मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ । हिजोको नारायणगढको गर्मी, आजको त्यो मनमोहक प्राकृतिक सुन्दरता र हिमालहरुसँग छोइएर आएको शीतल चिसो हावाले शरीर स्पर्श गर्दा मन रोमाञ्चित हुन्थ्यो ।
१ घन्टा त्यहाँ बसेर फेरि फर्कियौँ हामी । त्यहाँ विदेशी, नेपाली कोही थिएनन् । केवल, हामीमात्र त्यो भाग्यमानी मान्छे हौँ जस्तो भान हुन्थ्यो मलाई । घाम निकै चर्को हुँदै गएको थियो, अब फर्किने योजनामा हामी तल झ¥यौँ । हामी बसेको होटलमा पुगेर आफ्ना सामानहरु मिलायौँ र फूलैफूलले सजिएको पूरै काठको घर कुनै नयाँ दुलहीजस्तो थियो । होटलमा हामीले होटल र हिमाललाई पृष्ठभूमिमा पारेर फोटाहरु खिच्यौँ । केही विदेशीले पनि हामीसँग फोटा खिचे । हामी त्यसपछि चिया–नास्ता खाएर ओरालो लाग्यौँ । यदि म घान्द्रुक त्यतिबेला नगएको भए जीवनमा एउटा मह¤वपूर्ण यात्रा अधुरो हुँदोरहेछ जस्तो यो लेखिरहँदा अनुभव गर्दैछु । हामी ४ बजे फेदीमा आइपुगेर गन्तव्यतिर लाग्यौँ ।